Jerusarema muzambiringa usingabatsiri (1-8)
15 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, muzambiringa ungafanana nemimwe miti yese kana kuti nebazi remuti wemusango here? 3 Bango rinotorwa pauri rine basa raringaitiswa here? Kana kuti vanhu vangaugadzirisa hoko yekuturika midziyo here? 4 Iwo unokandwa mumoto kuti uve huni uye moto wacho unoparadza mativi awo ese maviri, wobvuraudzwa pakati pawo. Pane basa raungazoshandiswa here? 5 Kunyange pawainge uchakazara, hapana chawaigona kushandiswa. Ko kuzoti watsva uye wabvuraudzwa nemoto, pane chauchagona kuitiswa here?” 6 “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichaitira vagari vemuJerusarema sezvandakaitira muzambiringa uri pakati pemiti yemusango, wandakaita kuti uve huni.+ 7 Ndavatarisa ndakatsamwa. Vakapona mumoto, asi moto uchavaparadza. Uye muchaziva kuti ndini Jehovha pandichavatarisa ndakatsamwa.’”+ 8 “‘Uye ndichaita kuti nyika ive dongo,+ nekuti vakaratidza kuti havana kutendeka,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”